डिल्लीराम मिश्र शनिवार, जेठ ६, २०७४ 1665 पटक पढिएको
क्रान्तिबिना लौ कसले देख्यो, शान्तिपुरीको घरबार
क्रान्ति उज्यालो चाहिन्छ, यहाँ नेपाली यी सुकुमार ।
नेपाली साहित्यमा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको विशिष्ट स्थान छ । नेपाली साहित्यजगत्का सुविख्यात कविहरूमध्ये सिद्धिचरण एक हुन् । उनको कविताशिल्पको अन्तिम खोज मानव हो । उनका कवितामा विश्वको व्यथा छ, निजी मर्मस्पर्शिता छ, समाज सुधार्ने सामथ्र्य छ । उनका कवितामा देशप्रेम भरिएको छ । कवितामा जति प्रकृतिको उपासना र आराधना पाइन्छ, त्यति नै राजनीतिक चेतना र वेदनाको सहज धारा-प्रवाह जीवन्त छ । उनको कवितामा विरोधाभाष छैन सामाञ्जस्य छ । प्रकृतिको अत्यन्त सरल चित्रण गर्नु तथा समाजलाई उठ्ने चेतना दिनु उनको लेखनको वैशिष्ट्य हो।
त्यसैले कवितात्मक शैलीमा युगकवि सिद्धिचरण युगको आवश्यकता थिए । नेपाली साहित्यमा नयाँ चेतनाको गन्तव्य देखाउने सिद्धिचरण जस्ले आफ्नो सर्वश्व त्यागे, तर साहित्य त्याग गर्न सकेनन् । उनको अत्यन्तै लोकप्रिय र कर्णप्रिय गीतिकविता मेरो प्यारो ओखलढुंगा कालजयी सिर्जना हो । नेपाली शोककाव्य जगतमा कविवर माधवप्रसाद घिमिरेको कालजयी सिर्जना गौरीको जुन स्थान छ, स्थान परिचय र देशभक्तिको भावनामा युगकवि सिद्धिचरणको मेरो प्यारो ओखलढुंगा सिर्जनाको त्यही स्थान छ । नेपाली राष्ट्रप्रेमप्रति मार्मिक चेतना-प्रवाह रहेको उनको एउटा कवितांश -
क्यारुँ म यो देश निमित्त क्यारुँ
नाचु कि गाउँ कि गला मिलाऊँ !
सहर्ष काटी शिरमै चढाऊँ
यो श्वास जम्मै यसमै मिलाऊँ !
वि.सं. १९६९ जेठ ९ गते ओखलढुंगा जिल्लामा जन्मेका सिद्धिचरणले संवत् १९९० सालमा भुइँचालो कविता लेखनबाट आफ्नो साहित्यिकयात्रा आरम्भ गरेका हुन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं जन्मभूमिप्रतिको स्नेहपूर्ण भक्तिभाव उजागर गर्न उनको चम्कन युवक चम्क कविताले राष्ट्रबोधको बारेमा राम्रो सन्देश-प्रवाह गरेको छ । उनका कवितामा एकातर्फ प्रकृतिप्रेम र मानवीय वेदना प्रतिविम्बित छ भने अर्कोतर्फ समाज सुधारको पक्ष पनि दह्रो छ । सफल प्रकृति चित्रण र समाजलाई युगबोध चेतनातर्फ अभिप्रेरित गर्नु कविको वैशिष्ट्य कर्म हो । मुलुकभित्र र बाहिरसमेत तत्कालीन नेपाली समाजमा जनचेतना र जागरण अभिवृद्धि गर्ने अन्य कार्यमा संलग्नहरूले जस्तै देशका सबै साहित्यिकहरूले पनि गहन भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन राजनीति र साहित्यिक जगतमा विद्रोह र क्रान्तिको शंखघोष गर्ने प्रातः स्मरणीय विशिष्ट प्रतिभा युगकविले कविताको माध्यमद्वारा युगचेतना र जागरणको आन्दोलन आरम्भ गरेका हुन् । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखरपुरुष गणेशमान सिंहलाई गणेशमान बनाउन सिद्धिचरणको स्तुत्य भूमिका रहेको तथ्य स्वयं सिंहले स्वीकार गरेका छन् ।